Drama, Essays.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network - Page 5
Drama, Essays..	10
ဘယ်လိုအခန်းလဲ? ဘယ်လိုသတ္တဝါလဲ? ပြီးတော့ ဘယ်လိုသီချင်းလဲ?
”မှားပြီးမှ ပညာဖြစ်လျှင်…မမှားလို့ ဘာမှမဖြစ်သူထက် ပိုကောင်း၏”
​လောင်းကစားနဲ့ ​နေ၀န်းနီ -၁
Page5of 371«<...34567...102030...>»